Amanani eChartist: ungathengisa njani kwimarike yemasheya? | Ezezimali
Amanani eChartist: ungathengisa njani kwimarike yemasheya?
Elinye lamaqhinga okusebenza kwiimarike ze-equity yinto ebonakalayo ngamanani abizwa ngokuba yitshathi. Banokukunika umqondiso ongaqhelekanga wokubaluleka okukhethekileyo kokungena nokuphuma kwiimarike zemali. Ngayiphi na imeko, yinkqubo ebekelwe iprofayili ekhethekileyo yabatyalomali. Banjani abo babonelela nge ukuqhubeka nokufunda Kule klasi yokusebenza. Ngaphezulu kokunye ukuthathelwa ingqalelo kwezobugcisa ezinokubonelela ngokhuseleko esidlangalaleni.
Awungekhe ulibale ukusukela ngoku ukuba uhlalutyo lwetshathi yinxalenye yohlalutyo lobuchwephesha olufunda ukuhamba kwamaxabiso. Oko kubaluleke kakhulu namhlanje ukuba la manani ngawona enza amaxabiso kwaye abangela ukuba esi sicwangciso sotyalo-mali sibizwe ngokuba yi-chartism. Kodwa ngoku, inani ngalinye linayo Iintsingiselo ezahlukeneyo Kwaye basebenzela ukulumkisa ukuba ujongene nonyuko okanye ukuba ngokuchaseneyo kusezantsi. Esi sesinye sezitshixo sokutolika eli klasi lamanani emarike yemasheya.
Kwelinye icala, amanani eetshathi nawo abaluleke kakhulu ekuqinisekiseni ukuba imeko ephambili iya kuqhubeka okanye kungakho utshintsho kuyo. Abatyalomali abanamava ngakumbi kwiimarike zezemali bajonge le parameter ukuvula okanye ukuvala izikhundla kwiimarike zezabelo. Uhlalutyo olunzulu kakhulu olu hlalutyo ungaqwalasela ifayile ye impumelelo yokusebenza kwakho. Ngaphezulu kwezinye iindlela ezicingelwa ukuba sesichengeni okanye, ubuncinci njengokungathembeki kuvavanyo lwabo.
1 Amanani eChartist: ngoonxantathu abaliqela
2 Oonxantathu abanzi
3 Yintoni wedges?
4 Ukubuyela umva kunye nokubuyisa umva
5 Ukubuyisa umva: ngokuchaseneyo
6 Xa la manani eqhekeka
Amanani eChartist: ngoonxantathu abaliqela
Oonxantathu kweli klasi lamanani emarike yemasheya ngomnye wemithombo yolwazi efanelekileyo yokwenza imisebenzi kwimarike yemasheya. Ngomnye wemithombo efanelekileyo yokufumanisa ukuba ukhuseleko luku-uptrend okanye ukuba, ngokuchaseneyo, yi-bearish. Olunye loonxantathu oluchanekileyo lubizwa njengokunyuka. Kodwa ingaba le ndlela yohlalutyo lobuchwephesha iquka ntoni? Ewe, yenziwe ngokusisiseko ngomgca wokuxhathisa oxwesileyo kunye nesikhokelo esisebenzayo. Ukuthembeka kwayo kuphezulu kakhulu kwaye kunokusetyenziswa ngaphandle kobunzima kuba kulula ukuyifumana ngokulula.
Kwelinye icala, olunye oonxantathu abachaphazelekayo kuhlalutyo lobuchwephesha luchasene. Oko kukuthi, ukuhla. Kwimeko apho umgca othe tyaba wenziwe ukuba kule meko usebenza njengenkxaso kunye ne Isikhokelo se-bearish. Ngokubanzi, olu hlobo lwenani ludla ngokuhla, oko kuthetha ukuba amanyathelo amaninzi kufuneka athathwe xa kusamkelwa eli nani. Ngokukodwa ukuba le nkxaso iye yankqonkqozwa ngokuthe chu. Ngale ndlela, iyafana kakhulu kwimithombo yeendaba yakudala kuqwalaselo lwamaxabiso ayo.
Unxantathu wesithathu ngowona ubanzi kwaye igama lawo sele libonisa inani elilunge kakhulu kwimidla yabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kufuneka iqatshelwe ukuba le ikhetheke kakhulu kwaye kwangaxeshanye inani elinzima lohlalutyo lobuchwephesha ihlala ivela ngaphakathi yehla. Akumangalisi ukuba, into abeza kuyibonisa kukunyuka okukhulu kokungazinzi. Oko kukuthi, umahluko omkhulu phakathi kwamaxabiso aphezulu kunye neyona mincinci yezokhuseleko ehlaziyiweyo. Ngokungafaniyo namanye amanani, emva kwayo yonke into ayiboneleli ngeenjongo ezithile.
Eyona ngxaki inkulu ngeli nani kwiimarike ze-equity yile ayinakho ukuguqulelwa kwintsebenzo ethile. Nasiphi na isiganeko esinokwenzeka okanye into efanayo, phawula phezulu, ezantsi okanye imeko yangasemva. Ngandlela-thile, kufuneka iqondwe kuba ayiniki mqondiso othembekileyo malunga nento ekufuneka uyenzile ngamaxesha onke. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba bambalwa abatyali zimali abayithathela ingqalelo, ngakumbi abo banamava ngakumbi kwiimarike zezabelo.
Nangona ndikukhumbula kancinci ngelixesha i wedges olunye ukwakheka okungunxantathu. Kungenxa yokuba, ngokuhambelana, kunye neemodeli zangaphambili kuba zingamanani angunxantathu. Kodwa kule meko, ukubonisa idilesi efanayo. Ngokutolikwa kabini ukusukela ukwenyuka komtshato kubonelela ngokucacileyo kwi-bearish. Ngelixa ngokuchaseneyo, ukudibana okuwayo kuneempembelelo eziqinisekileyo. Ngenxa yoku kutolikwa, ziintshukumo ezinokusetyenziselwa ukuthenga okanye ukuthengisa izabelo, ngokwahlukeneyo. Ngokuthembeka okuphezulu kwisisombululo sayo.
Kwelinye icala, eyona ngxaki iphambili kwezi wedges zikhethekileyo, kuzo zombini ukunyuka nokuhla okwahlukileyo, kukuba azikho nzima ngakumbi ukuzibona. Emva kwayo yonke loo nto, kubalulekile ukubonelela nge- inqanaba eliphezulu lokufunda Kule klasi yamanani ngaphakathi kwetshathi okanye uhlalutyo lobugcisa. Kodwa ngale ngxaki isonjululwe, banokukunika ngaphezulu kovuyo olunye ukusukela ngoku. Phakathi kwezinye izizathu kuba uya kuba kwimeko engcono yokwenza ukonga kwakho kunenzuzo ukusukela ngoku.
Ukubuyela umva kunye nokubuyisa umva
Alithandabuzeki elokuba sijamelene neentshukumo ezimbini ezisetyenziswa kakhulu ngabatyali mali ukwenza imisebenzi yabo kwiimarike zezabelo. Nangona kuyinyani ukuba badla ngokudideka rhoqo. Ngesi sizathu, kubaluleke ngakumbi ukwahlulahlula ngokuchanekileyo. Ewe, oko kubizwa ngokuba kukuphosa umva yintshukumo ebuyela umva emva kwe- ikhefu elingaphezulu. Oko kukuthi, iqala inkqubo yokulungiswa kwexesha emva kokuphucula ukunyuka kwamaxabiso. Ukuma kufutshane kakhulu nokumelana.
Ngokuqhelekileyo inezincazelo ezinamandla kakhulu ze-bullish ngoko kufuneka isetyenziswe ukuthatha izikhundla ngendlela enobundlobongela. Ayothusi into yokuba inika amandla ohlaziyo ekufanele ukuba uthathelwe ingqalelo. Ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba eyona mpendulo ikhawulezileyo ngu ukusinda ngogonyamelo kakhulu kwicala elingaphezulu. Kwindawo yokuqala, ukubuyisa amaxabiso abo angaphambili kunye nethamsanqa elincinci kunye nomthamo omkhulu weekhontrakthi, iinjongo ezinamabhongo zinokufezekiswa kulonwabo lwabatyali mali abancinci nabaphakathi abagqibe ekubeni bathathe izikhundla ekuqaleni kwale ntshukumo yemarike yemasheya. .
Ukubuyisa umva: ngokuchaseneyo
Kwelinye icala, ukubuyela umva kubonisa okwahlukileyo kwenani langaphambili. Ngamanye amagama, inamandla amakhulu e-bearish. Oku kubangelwe kukuba kuhlalutyo lobuchwephesha kwimarike yemasheya, ibhekisa kwiintshukumo zembuyekezo okanye ukubuyisela ixabiso (phezulu okanye ezantsi) ukuya kumbutho wangaphambili wokwehla kwenkxaso, ukuxhathisa, imikhwa ebalulekileyo okanye imizobo okanye iitshathi esele zigqityiwe. Ke ngoko, ngamathuba okuthenga okanye ukuthengisa ukhuseleko, kuxhomekeke ekubeni inqanaba lexabiso liyaphuka okanye ukwenziwa kobuchwephesha okanye ubuchwephesha bobuchwephesha.
Ngayiphi na imeko, elinye lamaqhosha okugcina okanye ukufezekisa impumelelo ekusebenzeni kusekwe ekwazini ukwahlula zombini iintshukumo, ezingasoloko zilula kakhulu ukuqinisekisa. Ukuba awucacanga kakuhle ngale nkqubo yohlalutyo lobuchwephesha, kuya kuba ngcono uyeke ukwenza izigqibo malunga namaxabiso owafunayo thenga okanye uthengise ukususela ngoku ukuya phambili. Akumangalisi ukuba, ungawela kwimpazamo engaqhelekanga eya kuthi ihlawule kakhulu, njengoko kwenzekile kuninzi lwabatyali mali abanamava amancinci kwiimarike zezabelo.
Ngokuchasene noko, ungalibali ukuba ukubuyela umva akwenzeki ngalo lonke ixesha umgca wokuhamba usaphuka. Hayi kangako nokuba abatyali mali bacinga ngale ndlela. Kuba omnye umqondiso owongezelelweyo uyafuneka ukuqinisekisa ukomelela kwendlela entsha eqale nje ngelo xesha. Esi sesona sizathu siphambili sokuba kufuneka ixhaswe yimpendulo evela ezinye iiparameter zentengiso yemasheya. Kuba ekupheleni kosuku, ukuba kuphela eli nani lohlalutyo lobuchwephesha linikiwe, kuya kufuneka ubonise isilumkiso esithile malunga neenjongo zakho.
Xa la manani eqhekeka
Enye into ekufuneka uyivavanye kuhlalutyo oluchanekileyo lwala manani emarike yemasheya yile inento yokwenza nokuba kulo naluphi na uhlobo lohlalutyo lwegraphic (oonxantathu, iingxande, igxalaba-phakathi, phakathi kwezinye Eyona nto ibaluleke kakhulu) inokuvelisa ukubuyela umva xa eli nani lophukile. Ke ngoko, ubunzima bayo buyanda ngengqondo, njengoko ubona kwezi nkcazo sikunika zona. Ukuya kuthi ga kwinqanaba apho kunokuthiwa ukubuyela umva kwenziwa ngasemva kwayo yonke into njengesiqinisekiso sokusebenza kwentshukumo. Ngaphandle kwezinye izinto eziqwalaselweyo, kokubini ukusuka kwindawo yokujonga izinto kunye nakwisiseko sayo.
Ngelixa elinye icandelo, kulunge kakhulu ukuba uthathe ingqalelo ukusukela ngoku ukuba la manani awanakuchaneka. Oko kukuthi, banokuba ziintshukumo ezingezizo ezinokukhokelela ekusebenzeni okungalunganga ngokupheleleyo kwaye le yeyona ngozi inkulu onayo ukuba usebenzisa ezi paramitha kulwazi ukuze usebenze kwiimarike ze-equity. Kuba akukho mathandabuzo okuba uya kuba nakho ukushiya i-euro eninzi endleleni ukuba izenzo zakho azichanekanga. Kungumngcipheko omkhulu wokusebenzisa la manani sithethe ngawo kweli nqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Amanani eChartist: ungathengisa njani kwimarike yemasheya?
Ngaba uyazi ngokwenene ukuba yintoni i-mesoeconomics?
Ungayenza njani xa uphantsi kovalo lwesitokhwe?